Ingxenye: Umshado 2022 Julayi
Umshado 2022, Julayi
Umshado kaRuby: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-40 yomshado (2022)
Umgubho Weminyaka Engamashumi Amane - Umshado kaRuby. Yini ongayinika umyeni, unkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zokugubha iminyaka engu-40 yomshado
Umshado wamakhorali noma welineni: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-35 yomshado (2022)
Usuku lokugubha iminyaka engu-35 yomshado - umshado wamakhorali noma welineni. Okufanele unikeze, amasiko, iskripthi nezinye izici zokugubha iminyaka engu-35 yokuphila komshado
Umshado kaPearl: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-30 yomshado (2022)
Umgubho Weminyaka Engamashumi Amathathu - Pearl Wedding. Yini ongayinika umyeni, unkosikazi, abazali, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zokugubha iminyaka engu-30 yomshado
Umshado we-Crystal: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-15 yomshado (2022)
Umgubho Weminyaka Eyishumi Nanhlanu - Crystal Wedding. Yini ongayinika umyeni, inkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zeminyaka engu-15 yomshado
Umshado we-Nickel: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-12 yomshado (2022)
Umgubho Weshumi nambili - Umshado we-Nickel. Yini ongayinika umyeni, inkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zeminyaka engu-12 yomshado
Umshado wensimbi: okufanele ukwethule nendlela yokugubha iminyaka engu-11 yomshado (2022)
Umgubho Weminyaka Eyishumi Nanye - Umshado Wensimbi. Yini ongayinika umyeni, unkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zeminyaka engu-11 yokuphila komshado
Umshado we-tin: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-10 yomshado (2022)
Umgubho Weminyaka Eyishumi - Pewter Wedding. Yini ongayinika umyeni, inkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zeminyaka eyi-10 yomshado
Umshado kaFaience: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-9 yomshado (2022)
Ukugubha iminyaka eyisishiyagalolunye kungumshado we-faience noma we-chamomile. Yini ongayinika umyeni, unkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zeminyaka engu-9 yomshado
Isiphakamiso somshado esingavamile sanqoba i-Internet: akuwona wonke amadoda angakwazi ukusiphinda (2022)
Yonke intombazane iphupha ngesiphakamiso somshado esithandwa kakhulu esingakhunjulwa impilo yonke (futhi yenza abangani bayo babe nomona). U-Ashley Venetti waseMelika unokuthile angaziqhayisa ngakho: akekho omunye umuntu oke wanikezwa isipho esinjalo
Iziphakamiso eziyisi-7 zomshado ezingajwayelekile (2022)
Imisho ethinta inhliziyo, ehlekisayo nengavamile eyaqala uhambo olude lomndeni olujabulisayo lwezithandani
Umbhangqwana waphinda umshado ngemva kweminyaka engu-60 futhi wafakazela ukuthi uthando lwaphakade lukhona (2022)
Bathandana nedrung ngayinye ekuqaleni kokubona futhi ngokushesha bashada. Kodwa yayingekho imali yomthwebuli wezithombe, ngakho umbhangqwana othandweni waphinda wenza kabusha zonke izenzakalo zosuku oluyinhloko lokuphila kwabo. ngemva kweminyaka engama-60
Laba bashadikazi benza izifungo zokwethembeka esibhakabhakeni phezu kogwadule futhi kubukeka kuyisimangaliso (2022)
Umbhangqwana awuzange ucabange isikhathi eside mayelana nokuthi uzokwenza kuphi umcimbi womshado … noma kunjalo, iphupho lapho umshado uhlelwe khona lizomona noma ubani
Ubiza malini umshado wasebukhosini kanokusho? (2022)
Ingakanani imali esetshenziswa amakhosi: kungani umshado kaMeghan Markle ubiza kangaka?
Imishado yosaziwayo 2017: Imibhangqwana engu-7 eshadile (2022)
Lezi zithandani zezinkanyezi zavala ngokusemthethweni inyunyana yazo nomunye wazo obalulekile ngo-2017. Bajabule futhi basothandweni
INkosazana yaseMalaysia yashaqisa izwe ngokushada nomphathi nje ovela eHolland (2022)
Muva nje, kube nesigameko eMalaysia okuxoxwa ngaso yizwe lonke namuhla. Indodakazi kaSultan Johor okuwukuphela kwayo, uTunku Tun Amina, 31, washada nomphathi ojwayelekile, uDennis Verbaas, 28, waseHolland
Umbhangqwana ushada emadolobheni ahlukene emhlabeni (2022)
Lo mbhangqwana wawufuna umshado ongaphezu kowodwa ekuphileni kwawo. Bahamba emhlabeni wonke futhi bahlele umcimbi womshado edolobheni ngalinye kabusha. Funda imininingwane kundaba yethu
TOP 5 izinganekwane ezivame kakhulu lapho ulungiselela umshado (2022)
Ungawuhlela kanjani umshado futhi ungaxabani nawo wonke umuntu? Kwanele ukugwema izinganekwane ezimbalwa ezihlobene nalo mkhosi obalulekile. Bese konke kuzohamba njengewashi
Lapho ongachitha khona i-honeymoon yakho: izindawo ezi-6 zothando (2022)
Kunamakhona amaningi athokomele izithandwa emhlabeni. Kodwa ungaya kuphi ukuze uthole i-honeymoon ephelele? Sikukhethele izindawo ezi-6 ezihamba phambili zohambo lwakho lwe-honeymoon
Ungashada kanjani hhayi ehhovisi lokubhalisa (2022)
Uhlela umshado? Siyakuhalalisela! Uke wacabanga ukuthi leli holide lingabanjwa hhayi ehhovisi lokubhalisa, lapho umakoti ngamunye engenalo imizuzu engaphezu kwengu-15, futhi ngisho nomthwebuli wezithombe ongcono kakhulu emhlabeni ngeke asindise abahambeli, kodwa endaweni enhle kakhulu?
Umshado ohambisana nesabelomali: uwenza kanjani ube muhle futhi ube nesabelomali (2022)
Ungawuhlela kanjani umshado ukuze ungakhokhi izikweletu zakho enye ingxenye yempilo yakho? Ngemuva kwakho konke, wazi kahle: ubuhle abuhlali bubiza! Ukwabelana ngemibono ethokozisayo
Indlela yokulondoloza emasongweni omshado (2022)
Uma usuzoba nomcimbi ojabulisayo njengomshado, kufanele futhi ucabange ngokuba nemali eyanele yonke into. Izindandatho zomshado ziwuphawu lomshado wakho futhi zingunaphakade. Kodwa lokhu akusho ukuthi kufanele bazuze imali enhle kakhulu
Umshado ngoMeyi: izinsuku ezivumayo nezingezinhle zomshado ngoMeyi 2019 (2022)
Ingabe kufanele ushade ngoMeyi? Sibuze izinkanyezi ukuthi yiziphi izinsuku ngoMeyi ezivuna umshado nokuthi yiziphi ezingekho
Ukuhlobisa umshado: indlela yokudala iholidi wonke umuntu ozolikhumbula (2022)
Ingabe ufuna uku-oda umhlobiso womshado, ukuhlobisa ihholo ledili ngezimbali, ukhethe ukukhanya, ubeke i-arch futhi ngesikhathi esifanayo ungafuni ukuthi ibukeke njengabo bonke abantu? Khona-ke udinga umhlobiso womshado
Isixazululo esiyingqayizivele somshado ophelele - isikhathi esincane kanye nezindleko ezincane (2022)
Inqubo yokulungiselela umshado ihlale idinga ukunakekelwa nomthwalo wemfanelo. Le nqubo kufanele ihlanganiswe kahle futhi ihlelwe. Futhi nsuku zonke kuvuleka amathuba engeziwe okwenza ukulungiselela kube lula futhi kuguqule imisebenzi yasekhaya ibe ejabulisayo
Amathiphu angu-4 aphezulu mayelana nokuhlela umshado wesimanje futhi ungahlanyi (2022)
Sikhethe inani lamathiphu namasu ongakusiza ukuthi uhlele umshado wakho ngaphandle kokuhlupheka okungadingekile. Uma lingekho ithuba noma isifiso sokuxhumana ne-ejensi yomshado, ungakwazi ukuhlela iholide lakho ngokwakho
TOP 5 iningi lezimoto zoqobo ezizovela emshadweni (2022)
Ungazinciki injabulo yokukhulisa ukunakwa komphakathi ngesikhathi somshado wakho. Khetha hhayi kuphela ingubo engcono kakhulu yomshado wakho, kodwa futhi imoto
Umshado wango-2020: Izitayela ezi-5 ezintsha ezithakazelisayo (2022)
Ekuqaleni kwenkathi ngayinye yomshado, izitayela ezintsha zomshado ziyavela, okuwuhlobo lwemibono nesiqondiso ekuhleleni umgubho
Iliphi ikhekhe lomshado ongakhetha kulo ngo-2020: izitayela ezishisayo eziyi-7 (2022)
Utshwala emshadweni: indlela yokuhlela ibha ehlukile (2022)
Muva nje, abasanda kushada ngokuya bakhetha ukuhlela ibha yotshwala ehlukile emshadweni
Izitayela zomshado zika-2020 okufanele uziqaphele (2022)
Okuthrendayo komshado ka-2020 kunokuthatha okusha emshadweni njengomkhosi. Okokuqala, abahleli nabasanda kushada bathembele kumuntu ngamunye kanye nomkhathi, bese kuphela esithombeni esihle
Izimonyo zemfashini 2020: Imibono emi-5 yephathi ye-bachelorette (2022)
Uma uhlela iphathi ye-bachelorette kanye nephathi, kufanele ucabange ngesitayela sezithombe. Ingabe ufuna izithombe ezikhanyayo? Bese ukhetha into engavamile. Bheka lawa mathrendi wezimonyo wango-2020, ngokwesibonelo
Izitayela eziyi-8 zezingubo zomshado zango-2020 ongeke waziba (2022)
Uma ufuna ingubo yomshado yamaphupho akho, akudingeki ulandele imfashini, kodwa noma kunjalo izitayela eziphambili zika-2020 zingakusiza kulokhu
Umshado we-Porcelain: yini ongayinikeza nendlela yokugubha iminyaka engu-20 yomshado (2022)
Umgubho Weminyaka engama-20 - Umshado We-Porcelain. Yini ongayinika umyeni, unkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zokugubha iminyaka engu-20 yomshado
Umshado we-tin: amasiko nokuthi yini ongayinika iminyaka engu-8 yomshado (2022)
Umgubho Weminyaka Eyisishagalombili - Tin Wedding. Yini ongayinika umyeni, unkosikazi noma abangani, amasiko, indlela yokugubha kanye nezinye izici zeminyaka engu-8 yomshado
Makeup Wedding: 10 Wedding Makeup Ideas (2022)
Bheka ezithakazelisayo wedding makeup imibono indaba yethu
Umthwebuli wezithombe uthatha izithombe zemishado ngokubonakala kwamehlo ezithandwa (2022)
Umthwebuli wezithombe wase-Australia u-Peter Adams-Sean wenza amahlumela ezithombe zomshado eziyingqayizivele. Uyakwazi ukudubula umshado ngokubonakala kwamehlo abasanda kushada
Iseshini yesithombe somshado esiyingqayizivele ezansi kolwandle (2022)
Ngokwenkolelo evamile, ukuba manzi emshadweni kuyinhlanhla. Amaqhawe alezi zithombe aqhubekela phambili ngokuhlela iseshini yesithombe somshado … ngaphansi kwamanzi
Izitayela eziyi-10 zomshado ezifashisayo kakhulu nezinwele zezinwele ngo-2017 (2022)
Yini ezoba yimfashini ngo-2017? Yiziphi izimonyo zomshado nezinwele ezifanele? Izitayela ezihamba phambili zemfashini yomshado 2017 kakade kuphela
Umshado ongajwayelekile ngesitayela sesikhala. Umbono othakazelisayo womshado esihlokweni sesikhala (2022)
Umbhangqwana osemusha wanquma ukwenza umshado ngesitayela esingavamile - umshado esihlokweni sesikhala. Bona ukuthi yini eyaphuma kuyo kusayithi Okuwukuphela kwayo
Yiziphi izingubo zomshado ezivela ezizweni ezahlukene zomhlaba zibukeka (2022)
Emasikweni aseNtshonalanga, omakoti ngokwesiko bagqoka ingubo emhlophe ngosuku lwabo lomshado, ehlobanisa umbala wayo nobumsulwa nobumsulwa. Nokho, kwamanye amazwe amaningi, imihlobiso yomshado ibhekwa ngendlela ehluke kakhulu. Kanjani kahle - thola esihlokweni sethu